सबभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बन्यो 'कबड्डी-४', पूरै सिरिजको अहिलेसम्मकाे कमाइ कति? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com सबभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बन्यो 'कबड्डी-४', पूरै सिरिजको अहिलेसम्मकाे कमाइ कति? - खबर प्रवाह
रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘कबड्डी ४’ ले घरेलु बक्स अफिसमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्मको रेकर्ड राखिसकेको छ।
सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्मले चौथो साता पनि दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको छ। यो फिल्मले तेस्रो सातासम्म २१ करोड ३७ लाख कमाएको छ।
यसअघि ‘छक्का पन्जा ३’ ले २० करोड कमाएको निर्माता दीपकराज गिरीले दावी गरेका थिए।
फिल्मले बक्स अफिसमा सफलता पाएकोमा निर्देशक गुरुङले खुसी व्यक्त गरे। ‘फिल्म चल्दा खुसी नहुने कुरा भएन। दर्शक हलसम्म आउनु हाम्रो फिल्म हेर्दिनु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। तर रेडर्क तोड्यो भन्ने सामान्य कुरा हो। दर्शकहरूको माया पाइयो त्यो नै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने।
‘लामो समयसम्म दर्शकले फिल्म हलमा गएर फिल्म हेरेका थिएनन्। फिल्मले सफलता हात पार्नुमा विभिन्न पाटाहरू छन्। यसमा अघिल्ला सिरिजको पनि उतिकै भूमिका छ। कबड्डी १ देखि ४ सम्म आइपुग्दा दर्शकमाझ कौतुहलता बढाउँदै लग्यो। यसको श्रेय कबड्डी १ लाई पनि जान्छ। त्यस्तै, हामीले फिल्मको प्रमोशनमा पनि निकै ध्यान दिएका थियौं,’ निर्देशक गुरुङले भने।
वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठका अनुसार बक्स अफिसमा ‘कबड्डी’ले करिब ६ करोड र ‘कबड्डी कबड्डी’ले करिब ९ करोड कमाएको थियो। यसैगरी ‘कबड्डी ३’ ले १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो।
यसैलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म कबड्डी सिरिजले करिब ५० करोड २२ लाख कमाएको छ।
कबड्डी ४ ले अत्याधिक शो पाउने पहिलो फिल्म, सर्वाधिक अग्रिम टिकट बुकिङ हुने पहिलो फिल्म, घरेलु बक्स अफिसमा सर्वाधिक ओपनर, पहिलो साता सबभन्दा धेरै कमाउने फिल्म, अष्ट्रेलियामा धेरै कमाउने फिल्म, दोस्रो साता धेरै कमाउने फिल्म, सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म, तेस्रो सातामा सबभन्दा धेरे कमाउने फिल्मजस्ता रेकर्ड राखेको छ।
जेठ १३ गतेदेखि प्रदर्शन भइरहेको फिल्मले पहिलो दिन तीन करोडमाथि कमाएको थियो। समाजिक कथावस्तुलाई कमेडीमार्फत प्रस्तुत गरिएको फिल्ममा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, मिरुना मगर, गौमाया गुरुङ, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, जयनन्द लामा, प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ, शरद अधिकारी लगायतका कलाकारको अभिनय छ।
ब्रालेट-शर्टसमा सिजलिङ श्वेता
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह उतिसाह्रो मिडियामा आउन चाहदिनन् । केही समय अगाडि मिडियासँग कुराकानी नै नगर्ने भन्दै हिडेकी यी नायिका आफ्नै दुनियाँमा मस्त छिन् । झन, एक यूवाको प्रेममा परेपछि त साम्राज्ञी उनीसँगै बढी समय बिताइरहेकी हुन्छिन् । फिल्मको लाइनअपको कुरा गर्दा उनी चाडै नै ‘लण्डन टू पेरिस’को छायांकनमा व्यस्त हुनेछिन् । ‘तिम्रो मेरो साथ […]
म अयज देवगनका कारण सिंगल नै रहेँ: तब्बू
बलिउडमा ९० दशकका हिट जोडी हुन्, तब्बू र अजय देवगन। उनीहरूले थुप्रै हिट फिल्म दिएका छन्। हालै तब्बूले एक अन्तर्वार्तामा अजयसँग आफ्नो मित्रताको बारेमा कुराकानी गरेकी छन्। उक्त अन्तर्वार्तामा उनले अजय देवगनको कारण आफू अविवाहित रहेको खुलासा गरिन्। ‘अजय मेरो काकाको छोरा समीर आर्यका छिमेकी र नजिकका साथी थिए। हामीहरू सँगै हुर्कियौं। म सानो हुँदा […]
फेरि डिभोर्स गर्ने भए ९१ वर्षीय रूपर्ट मर्डोकले
मिडिया उद्यमी रूपर्ट मर्डोकले फेरि डिभोर्स गर्ने भएका छन्। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ९१ वर्षीय अर्बपति मर्डोकले चौथो पटक डिभोर्स गर्न लागेका छन्। मर्डोक र पूर्वमोडल तथा अभिनेत्री जेरी हलबीच २०१६ मा विवाह भएको थियो। हल अहिले ६५ वर्षकी भइन्। स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै टाइम्सले मर्डोक र हलले डिभोर्स गर्न लागेको उल्लेख गरेको हो। उनीहरू दुबै जनाले […]
आदिपुरुषलाई प्रभासले मागे १२० करोड
प्रभास दक्षिण भारतीय फिल्मको मात्र नभई बलिउडका लागि पनि चिनिएका अभिनेता हुन् । उनले फिल्म ‘बाहुबली’मार्फत भारतसँगै विश्वभर लोकप्रियता कमाए । उनको फिल्म हेर्न जोकोही लालयित हुन्छन् । हालका दिनमा उनी नयाँ फिल्म ‘आदिपुरुष’का कारण चर्चामा छन् । प्रभासले फिल्म ‘आदिपुरुष’का लागि आफ्नो पारिश्रमिक बढाएका छन् । उनले निर्मातासँग १ सय २० करोड भारु […]
भन्सालीको फिल्मबाट ‘कमब्याक’ गर्दै मनिषा कोइराला
मुम्बई । बलिउडका सुपरहिट निर्देशक एवं निर्माता संजय लीला भन्सालीको आगामी फिल्म डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज हुने भएको छ। उनी निर्देशित हीरामण्डी फिल्म वेवसिरिजको रुपमा नेटफ्लिक्समा सार्वजनिक हुने बलिउड हंगामाले जनाएको छ। नेटफ्लिक्सले हीरामण्डीलाई अहिलेसम्म दुई सय करोड खर्च गरिसकेको समाचारमा उल्लेख छ। भन्सालीको यो फिल्ममा सोनाक्षी सिन्हा, मनिषा कोइाराला, हुमा कुरेसी र ऋचा चड्डाको […]